Nin isku dayey inuu dilo Raisul Wasaare Justin Trudeau oo gacanta lagu dhigay | Dhexnimo Media
Home Wararka Nin isku dayey inuu dilo Raisul Wasaare Justin Trudeau oo gacanta lagu...
Nin isku dayey inuu dilo Raisul Wasaare Justin Trudeau oo gacanta lagu dhigay
Booliska Canada ayaa sheegay iney qabteen Nin hubaysan oo ka tirsan milatariga dalkaas ka dib markii uu xoog ku galay albaabka xaafad uu deggan yahay ra’iisal wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau oo ku taalla magaalada Ottowa.
Ninkaasi ayaa gaari jiirsiiyay albaabka weyn ee laga soo galo xaafada Rideau Hall oo ah halka uu magaalada Ottawa ka deggan yahay ra’iisalwasaare Trudeau, ka hor inta aysan boolisku qaban.
Justin Trudeau iyo xubnaha qoyskiisa ayaa ka maqnaa gurigooda markii uu falkan dhacayey, waxaana la sheegay iney si ku meel-gaar ah u deggan yihiin xaafaddan inta laga dhameystirayo dayactir ku socdo gurigiisa rasmiga ah.
Booliska ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan uu ka tirsan yahay milatariga dalkaasi, waxaana magaciisa lagu sheegay Corey Hurren, iyadoo la baarayo haatan ujeedada uu falkan u geystay iyo waxa uu damacsanaa.
Burbur xooggan ayaa soo gaaray ganjeelka laga soo galo xaafaddaasi, taasi oo ninkani uu ku dhuftay gaari uu watay sida ay muujinayaan Sawirro laga soo qaaday albaabka kore ee laga soo galo xaafaddaasi.
Gaariga uu ninkani ku dhuftay ganjeelka ayaa markii dambe waxaa loogu yeeray ciidamada u tababaran furfuridda walxaha qarxa si ay walxaha qarxa uga raadiyaan.
Arrinkan ayaa ku soo beegmaya xili Mr. Trudeau uu dhawaan qaaday tallaabooyin uu ku xaddidayo iibsiga noocyada qaar ee hubka ka dib markii horraantii sanadkan gobolka Nova Scotia ee dalkaasi uu ka dhacay weerar toogasho ah oo dad badan lagu laayey.
Previous articleDowlada Itoobiya oo war ka soo saartay sababta loo xidhay Jawar Mohamed
Next articleRa’isul Wasaare Abiy oo ku faanay in la fashiliyay shirqool ka dhan ahaa Dowlada Itoobiya